Romeo Power weputara 'Saber' batrị dị na mpụga nke nwere ike ime ihe ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Romeo Power weputara 'Saber' batrị dị na mpụga nke nwere ike ịme ihe ọ bụla
Romeo Power, ụlọ ọrụ raara nye ngalaba batrị akụrụngwa, ebuputela batrị mbụ na mpụga maka ojiji nkeonwe n'okpuru aha "Saber". Batrị a, dị ka ụfọdụ kọwara ya site na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, bụ «Dị ka iburu plọg na akpa gị».
Sabre bụ batrị ị nwere ike ịchọta na agba dị iche iche: uhie, ojii ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. O nwere ike ịbụ nwetụrụ nnukwu na arọ (rute kilogram). Mana mgbe ị matara ụdị ngwaọrụ niile (gụnyere laptọọpụ) nwere ike ibu, ọ ga-abụrịrị data dị gị mkpa.
Romeo Power na Saber ya maara na inye batrị mpụga nke nwere ike iguzogide ihe ma ọ bụ dịrị njikere ịnata mmetụta, bụ mgbakwunye. Kwuru ma mee, Saber ga-enwe ike iguzogide uzuzu, mmiri na ujo. Ka ọ dị ugbu a, ihe ọzọ na-adọrọ mmasị gbasara batrị a bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ njikọ ọ na-enye ndị ọrụ njedebe. Ruo ngwaọrụ 4 nwere ike ịgba ụgwọ n'otu oge yana njikọ ị nwere ike iji bụ: USB, USB-C, AC, DC. Ha nile biri na akuku abuo nke batrị Sabre.
Ka ọ dịgodị, Ike batrị Romeo Power ruru 86 Wh ma nweta ụgwọ zuru ezu na awa 2 (nwee ọ chargingụ ngwa ngwa). Iji ike ị na-echekwa n’ime, ị ga-akwụ ụgwọ ya ruo ugboro 2 laptọọpụ zuru ezu. Ọ bụrụ na anyị anya na mpaghara nke mbadamba, Ibu ndị a na-agbago 4 zuru ezu. Ebe ọ bụrụ na i jiri Romeo Power Sabre na-akwụ ụgwọ ekwentị gị, ị ga-erugharị 10 zuru ezu.
Ọnụahịa nke batrị mpụga a na-awụ akpata oyi n'ahụ na nke ọnọdụ ọ bụla n'ozuzu bụ nke 199 dollar. Ọ dị tupu ire ere ma a ga-ebufe nkeji izizi n'afọ a. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị nwere anya ha na ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ yana ọghọm bụ na ị nwere obere ntọala. Romeo Ike Sabre ị nwere ihe ngwọta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Romeo Power weputara 'Saber' batrị dị na mpụga nke nwere ike ịme ihe ọ bụla
Nokia 7, n'etiti etiti Nokia ọhụrụ nọ ugbu a
Google Pixel 2 XL na-aga site n'aka nke iFixit